आइन्स्टाइनको उन्नतीको रहस्य | प्रेरक संसार
आइन्स्टाइनको उन्नतीको रहस्य
अल्बर्ट आइन्स्टाइन आइन्स्टाइनसित एकपटक एकजना विद्यार्थीले प्रश्न गर्यो । तपाइको उन्नतीको रहस्य के हो बताइदिनु हुन्छ की ? आइन्स्टाइनले...
आइन्स्टाइनसित एकपटक एकजना विद्यार्थीले प्रश्न गर्यो । तपाइको उन्नतीको रहस्य के हो बताइदिनु हुन्छ की ?
आइन्स्टाइनले बडो नमैतापूवर्क जवाफ दिए, ''मेरो उन्नतीको रहस्या एउटै सुत्रमा छ हिम्मत कहिल्यै नहार्नु । जब म सानो थिएँ, त्यतिबेला स्कूलका सबै साथीहरु मलाई बुद्धू भनेर जिस्काउदथे । शिक्षकले गरेको प्रश्नको जवाफ दिन म सक्दिनथे । त्यसैले मलाई बारम्बार बेञ्चमाथी उभिनु पर्दथ्यो । त्यसमथि गणितका शिक्षक भन्ने गर्दथे तिमी त सात जुनीमा पनि गणित सिक्न सक्दैनौ । यो सुनेर म मनमनै रुन्थे, तर मैले कहिल्यै हिम्मत हारिनँ ।''
प्रेरक संसार: आइन्स्टाइनको उन्नतीको रहस्य